Heerkulka Low Medical Platform Operating - Shiinaha Shandong Zhongbaokang Medical
Waqti Delivery: In 9 toddobaad
Awoodda Supply: 30 qaybood bil kasta
Waxa loo isticmaalaa in saldhigyada dhiig, isbitaalada, xarumaha faafa iyo machadyada cilmi qaar ka mid ah. Waxaa ka dhigi kartaa meel heerkulka yar yahay shaqo 2-8 ℃ in ay sii processing dhiig ka soo saamaynta heerkulka sare oo ka baxsan, taas oo hagaajinaysaa ammaanka dhiigga. Waxa kale oo loo isticmaali karaa Heerkulka Low Dissection Platform.
Heerkulka in meesha shaqada waa labis iyo waxaa jira uumiga lahayn.
sterilizer UV ka damaanad qaadaya in goobta shaqada waa ka xor faddarayn.
Qaab dhismeedka kala qaybsameen, qaylada No.
Easy in ay u guuraan iyo dhuujin.
Next: Diyaarinta Instrument Of Arrimaha Cryoprecipitated Antithemophilic
Heerkulka Medical Low Working Golaha Wasiirada